Home News Cabdisamad Macalin Maxamuud, oo ka shaqeynaya burburka GalMudug (Sababta)
Cabdisamad Macalin Maxamuud, oo ka shaqeynaya burburka GalMudug (Sababta)
Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladdii KMG Cabdisamad Macalin Maxamuud, ayaa ka shaqeynaya sidii ay u burburi lahayd maamulka GalMudug isagoo wakiil u ah Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre.
Cabdisamad ayaa xusul duub uga jira sidii booska wasiirka beesha Ceyr looga qaadi lahaa Wasiir Sabriye oo isaga loogu dhiibi lahaa, balse si aay taa u dhacdo waxaa loo diray howsha ah in uu burburiyo maamulka GalMudug si ay Farmaajo iyo Kheyre u helaan shaqsi iyaga taabacsan in hoggaanka u qabto GalMudug.
Madaxweyne Farmaajo aya ku haminaayo in uu helo muddo kororsi laba sano ah, si uu taa u helanaa waa in uu ogolaasho ka helaa maamulada federaalka ah. Madaxweyne Farmaajo aya ka dhameystay Shariif Xasan iyo Cabdiwali Gaas sidii ay kulligood u heli lahaayeen muddo kororsi balse waxaa ka biyo diiday shacbiyadda Koofur Galbeed iyo Puntland.
Madaxweyne Farmaajo ayaanan caqabad u arkin maamulka Hirshabeelle balse haddii la helo GalMudug uu u arko fursad uu ku heli karo muddo kororsi laba sano ah.
Previous articlePuntaland Oo Dib Ula Wareegtay Deeganka Af-urur
Next articleAbaanduulihii xilka laga qaaday oo la baxsaday gaadiid iyo ciidan
Maxaadan ogayn oo kusoo kordhay Doontii Habeen hore ku degtay Bada...
Duqa Muqdisho oo Dayacay Muqdisho&Shirar Iyo Xaflado Joogta Ah oo Dhaqaalaha...